ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် လေဆေးသောက်ရင် နောက်ဆက်တွဲ ဘာဖြစ်နိုင်ပါသလဲ . . .
ဆီးချိုရောဂါက သူဌေးရောဂါလား . .
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး ( ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ရှိသူတွေဟာ ကမ္ဘာနဲ့တစ်ဝန်းမှာ များပြားလာတာကို လူတိုင်းသတိ ပြုမိပါလိမ့်မယ်။ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှင်တစ်ဦး အိမ်မှာရှိပြီဆိုရင် သူ့အတွက်တစ်သက်တာ သုံးစွဲရမယ့်စရိတ်တွေကို ကြိုတင်စဉ်းစား ထားရပါလိမ့်မယ်။ ဆီးချိုဆေးကုရာမှာ လိုအပ်တဲ့ ဆေးဖိုး၊ နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါပူးတွဲပြီးပါလာရင်...
အရေပြား ကုတ်ခြစ်ခြင်းကိုစွဲလမ်းနေသောအမျိုးသမီး စိတ်ပညာ ကုထုံးကြောင့် သက်သာလာ
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး အမာရွတ်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေအောင် အရေပြားကုတ်ခြစ်ရတာကို စွဲလမ်းနေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ စိတ်ပညာကုထုံးကြောင့် သက်သာလာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကနေဒါနိုင်ငံမှ အန်ဂျလာဟာ့ဒ်လင်းက သူရဲ့မျက်နှာ၊ လက်တွေနဲ့ ရင်ဘတ်စတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို တစ်ရက်ရှစ်နာရီနီးပါးကြာကြာကုတ်ခြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေဟာ သူရဲ့ရောဂါအခြေအနေကြောင့် ဦးနှောက်ခြောက်ခဲ့ကြပြီး...
သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာမှုအရ တွေ့ရှိရသည့် ပျော်ရွှင်စေကြောင်း နည်းလမ်းများ
– တရားထိုင်ပါ၊ ဦးနှောက်ကို ပြန်လည်တည်ငြိမ် စေပါတယ်။ – ခရီးအတွက် စီစဉ်ပါ၊ မသွားရသေးဘဲနဲ့တောင် စိတ်ကြည်နူးနေမှာပါ။ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေသူ ငယ်ချင်းတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းပါ၊ စိတ်အပန်းပြေ နေပါလိမ့်မယ်။ – အလုပ်နဲ့နီးနိုင်သမျှ နီးတဲ့နေရာကို ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပါ၊ အလုပ်အသွားအပြန် ခရီးဝေးတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့...
တူးတဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားမိတဲ့အခါ . .
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)ဖြေကြားသည်။ မေး။ တူးတဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားသင့်ပါသလား။ စားမိရင် ဘယ်လို ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါ သလဲ။ ကိုဝေယံကျော်၊ သမိုင်း။ ဖြေ။ တူးတဲ့ အစားအသောက်တွေကို လုံးဝ မစားသင့်ပါဘူး။ လွှင့်ပစ်ဖို့ နှမြောနေရင်တောင်...
ညဘက် နောက်ဆုံးအစာ စားသင့်သော အချိန် . .
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)ဖြေကြားသည်။ မေး။ အစားအသောက်ကို ညဘက်မှာ ဘယ်အချိန် နောက်ဆုံးထားပြီး စားသင့်ပါသလဲ။ ဒေါ်ခင်မာ၊ တာမွေ။ ဖြေ။ အစားအသောက်ကို ကိုယ်အိပ်တဲ့ အချိန်နဲ့ အနည်းဆုံး သုံးနာရီလောက် ခြားပြီး စားသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ ည...
သင့်ကလေးကို ဆေးခါး ဘယ်လိုတိုက်မလဲ
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊ ဆေးအများစုဟာ အ၀င်ဆိုးပြီး ခါးပါတယ်။ ခါးတာကို သည်းမခံနိုင်တဲ့ကလေးတွေကိုဆေးခါး တိုက်ရခက်သလို ဆေးခါးဝင်ပြီးချိန်မှာ ပျို့အန်ထွက်တာ၊ မျိုဖို့ ခက်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် မိဘတွေဟာ ကလေးကို ဆေးခါး တိုက်ရတော့မယ်ဆိုရင် အကြီးအကျယ် စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။...
ရေအေးသောက်ခြင်းနှင့် ရေနွေးသောက်ခြင်းတို့၏ ကောင်းကျိုးများ
၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က ရေတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ အစာမရှိဘဲ ရက်သတ္တပတ်များစွာ အသက်ရှင်နိုင်ပေမယ့် ရေမရှိဘဲသုံးရက်တောင် အသက်မရှင်နိုင်ပါဘူး။ ရေက လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေးကြီး လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာ ပါဝင်တယ်ဆိုတာ အံ့အားသင့်စရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရေက ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကို ထိန်းနိုင်တယ်၊...
အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်စေနိုင်သည့် မျက်စိဝေဒနာ . .
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း(မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မေး။ မျက်စိနဲ့ ပတ်သက်ရင် အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အထိ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဝေဒနာဆိုတာ ရှိပါသလား သိချင်လို့ပါ။ ဦးမြင့်ဦး၊ တွံတေး။ ဖြေ။ အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ မျက်စိဝေဒနာဆိုတာရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုရင် ကင်ဆာနဲ့တွဲပြီး မျက်စိမှာဖြစ်တဲ့ ဝေဒနာတွေက စိုးရိမ်ရပါတယ်။ ဥပမာ ကလေးတွေမှာဆိုရင်...
စိတ်ဖိစီးမှုကို အနိုင်တိုက်နေကြသော ခွန်အားကြီးမား မိန်းမသားများ
၊ သဒ္ဒါထက် ၊ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်လာရင် သင်ဘယ်လို အနိုင်တိုက်လေ့ရှိပါသလဲ၊ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ အနိုင်တိုက်တာ အလုပ်ဖြစ်ပါရဲ့လား။ စိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်လာတဲ့အခါ အနိုင်တိုက်နေကြတဲ့ ကမ္ဘာကျော် အမျိုးသမီးတချို့ရဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အတုယူနိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ – အင်ဂျလီနာဂျိုလီ စိတ်ဖိစီးမှုဖြေရှင်းတဲ့ နံပါတ်တစ်အချက်က မိသားစု၊...
၊ စူး(ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်)၊ ထမင်းဖြူနဲ့ကြော်ရမှာမဟုတ်ဘဲ ဆန်လုံးညိုကို အသုံးပြုပြီး ကြော်စားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှု များတဲ့အပြင် ဗီတာမင်ဘီကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ – ချက်ထားတဲ့ ဆန်လုံးညို နှစ်ခွက်၊ – ကြက်ရင်ပုံသား တစ်လက်မခွဲအရွယ် တစ်တုံး၊ – ကြက်ဥအကာတစ်လုံး၊ –...
Page 479 of 521« First‹ Previous475476477478479480481482483Next ›Last »
မှတ်ဥာဏ်ကောင်းမွန်စေရန် ဆရာဝန်တို့ အတည်ပြုထားသည့် နည်းလေးသွယ်
စိတ်တိုဒေါသထွက်စေသည့် အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ အချက်လေးရပ်
တစ်နေ့ အကြိမ် ၅၀ ခန့် အန်နေသည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီး
လေဖြတ်ခြင်းနှင့် နှလုံးရောဂါအန္တရာယ် လျော့ကျစေရန် စားသင့်သည့် ပိုတက်စီယမ်ပြည့်ဝအာဟာရများ